musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » misangano » Blossom Hotel Houston Inowedzera Kuvhurwa Kutsva Kunopihwa Kumapoka
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • ushanyi • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Iyo ichangoburwa yekuwedzera kune yeHouston's yeumbozha hotera, Blossom Hotel Houston yatangisa akati wandei enguva shoma anopihwa akagadzirirwa kubatsira varongi vezviitiko kunyatsoita misangano yavo. Kubva pakuwana katatu mapoinzi ekuvimbika uye kuwana kudzoserwa kunosvika 5% pabhiri rechikwereti kusvika kune yakaringana mari pamidziyo yekuteerera-inotaridzika uye mitengo yakasarudzika pakugara kwevashandi, nyanzvi dzeMICE dziri kutsvaga kuitisa chiitiko chavo chinotevera muHouston vachawana zvakawanda zvekuda.
Pakati pezvino kusvika 31 Zvita 2021, iyo New Hotel Promotion inopa huwandu hwezvibvumirano zvakasarudzika.
Inogona kubhuka pakati pa1 Ndira 2022 na31 Kurume 2022, iyo Enhance Your Event promotion inobvumira vanoronga misangano mamwe mabhenefiti.
Blossom Hotel Houston inozvikudza 9,000 mativi emamita eakawanda-anoshanda chiitiko nzvimbo yemagungano, makonferensi akasanganiswa, zviratidzo zvekutengeserana, masemina, kudzoka kwevakuru, uye maworkshop.
Iri pedyo neNRG Stadium neTexas Medical Center, Blossom Hotel Houston ine 9,000 square feet of multi-functional event space space inokudza zvakasiyana siyana zveboka rega rega, kusanganisira magungano, mahybrid conferences, trade show, seminar, executive retreats nema workshops. Imba huru yemusangano, iyo Luna Ballroom, inozvikudza-ye-the-art yekuteerera nekuona uye inogona kugarisa vanhu vanosvika mazana maviri nemakumi mashanu, pamwe neinopamhama pre-function nzvimbo. Nekudzikama kwayo, yakafuridzirwa nemwedzi-yakafuridzirwa theme yeruvara uye yakasarudzika kubata, bhora rebhora rinopa rakakwana marongero emichato nemhemberero dzemagariro. Kuputika uye misangano midiki inogona kuitwa mumakamuri mapfumbamwe ekuwedzera emisangano ane hurongwa hwepasi uye zvigadziriso zvekugara kuti zvigadzirise chero chimiro chechiitiko kubva kudare repamusoro bhodhi remusangano uye yemitambo yemitambo yemitambo kune isina kurongeka network yekudya kwemangwanani uye tech-savvy yekutengesa mharidzo.
Inoshanda kune zviitiko zvevanosvika gumi vashanyi vakarongerwa uye vakaitwa pakati pezvino kusvika 10 Zvita 31, iyo New Hotel Promotion inopa huwandu hwezvibvumirano zvakasarudzika:
5% kubva pane master bill pane ese anokodzera mhosva
Imba imwe chete inodiwa pamakamuri 35 ega ega akabhuka
Mari inochengeterwa pekugara kwevashandi
20% kuchengetedza pane audiovisual zvishandiso
Complimentary standard Wi-Fi mumakamuri ekurara uye ekusangana
10 complimentary parking pass.
Inobhuka pakati pa1Ndira 2022 na31 Kurume 2022, iyo Wedzera Chiitiko Chako kukwidziridzwa kunobvumira varongi vemisangano kubata chengetedzo yemakamuri gumi evaenzi husiku hwega hwega uye/kana kushandisa mari isingasviki $10 pakudya kuti vasarudze chero mabhenefiti maviri:
3% kubva pane master bill pane ese anokodzera mhosva
Imwe yekofi yekudyira yekuzorora (60 maminetsi ebasa rinoenderera)
Inokwana yakawedzera Wi-Fi munzvimbo yekusangana
Triple Stash Reward Planner Points.
Muhotera ine nhurikidzwa gumi nenhanhatu zvinosanganisira makamuri mazana maviri nemakumi matanhatu nenomwe evaenzi uye masutu ane nzvimbo dzekugara dzakapamhama, chiedza chemusikirwo chakawanda uye zvakanatswa, zvishoma. Iyo hotera inopawo zvimwe zveumbozha, zvinosanganisira yemazuva ano, 16/267 Fitness Center yakashongedzwa nePeloton®; dziva repamusoro pedenga remba uye imba yekutandarira ichizvitutumadza maonero edhorobha reHouston. Kuti uwane kubhuka uye rumwe ruzivo nezve zvinopihwa, ndapota shanya BlossomHouston.com.
Nezve Blossom Hotel Houston
Blossom Holding Group ichakurumidza kuburitsa pfungwa yayo yekutanga yeUS, Blossom Hotel Houston, chiitiko chitsva chepasirese chakadzika midzi muSpace City. Ihotera iyi inoisa vashanyi nhanho chete kubva kuchipatara chikuru chepasi rose uye Houston mabhizinesi epamusoro-soro nenzvimbo dzevaraidzo, uye sehotera yepedyo yeumbozha kuNRG Stadium, iri zvakare maminetsi kubva kune inozivikanwa Houston. Zvingave zvekufambira zvinodiwa zvekurapa, bhizinesi kana mafaro, vashanyi vanogona kunakidzwa nekusiyana kweHouston, iyo inoratidzwa zvakare muhotera dzehotera kumidzi yeaerospace yeguta, vachitora mukana wekutenga kwekutengesa kwehotera, maresitorendi maviri ane chef, zvivakwa zvisingaenzaniswi. uye masevhisi, dzimba dzevaenzi dzeumbozha uye kuwanda kwezviitiko nenzvimbo dzekusangana. Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota shanya BlossomHouston.com Kana kutitevera isu Facebook uye Instagram.